ढोरपाटन सिकार आरक्षमा ९ नाउर र ४ झारलको शिकार - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ बैशाख २३, बिहीबार १८:१४
ढोरपाटन सिकार आरक्षमा यस आर्थिक वर्षको दोस्रो शिकार सिजन (चैत–वैशाखमा) ९ वटा नाउर र ४ वटा झारलको शिकार भएको छ । अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण शिकार गर्न आउने सिकारीहरु नआएपछि एउटामात्र सिकार भएको आरक्षमा यस वर्षको दोस्रो याममा भने विदेशी शिकारीहरुले ९ नाउर र ५ झारलको सिकार गरेका छन् । सिकार अनुमति लिएका सिकारीले ६ वटा झारलको सिकार गर्नुपर्नेमा १ झारलको शिकार हुन नसकेको सिकार आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ ।
यस वर्षको दोस्रो सिकार सिजनमा करिव २५ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ । नाउरको १ लाख ८१ हजारदेखि १ लाख ९५ हजार र झारलको १ लाखसम्म टेन्डर जितेर सिकार भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
पहिलो शिकार सिजन असोज–कात्तिकमा ९ वटा नाउर र ५ वटा झारलको शिकार अनुमति दिईएको भएपनि कोभिड–१९का कारण शिकार हुन सकेको थिएन । पहिलो सिजनमा १ झारल र १ नाउरको मात्र शिकार भएकोमा चालु वर्षको दोस्रो सिजनमा करिव लक्षको नजिक शिकार भएको आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बिरेन्द्र प्रसाद कँडेलले बताउनुभयो ।
ढोरुपाटन सिकार आरक्षको फागुने, बार्से, सेङ, दोगाडी, घुस्तुङ, सुर्तिबाङ र सुनदह ब्लकमा शिकार खेल्ने गरिएको उहाँको भनाई छ । यस सिजनमा सिकार कम्पनीहरु, नेपाल ट्राभल एक्सपिडिसन प्रा.लि. ललितपुर, हिमालयन वाईल्डलाइफ आउटफिर्टस प्रा.लि. ग्लोबल सफारिज प्रा.लि. ठमेल काठमाण्डौ र हिमालयन सफारिज नक्साल काठमाण्डौमार्फत शिकारी सिकार क्षेत्रमा पुगेका हुन् ।
शहासिक यात्रा र कार्य भएकाले नेपाली सिकारीहरु आरक्षमा सिकार गरेको पाईदैन । तर लाखौं खर्चेर विदेशबाट आएका शहासिक शिकारीहरुले आरक्ष क्षेत्रमा सिकार खेल्ने गरेको संरक्षण अधिकृत कँडेलले बताउनुभएको छ ।
सिकारको दोस्रो सिजनमा युरोपियन मुलुक अमेरिका, प्रान्स, युक्रेन, रुस, र स्पेन लगायतका देशहरुबाट पेशेवर शिकारी आउने गर्दछन् । सिकारका लागि प्रत्येक सिजनमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले बोलपत्र आह्वान गरेर शिकारको कोटा र राजश्व दर निर्धारण गर्छ । यस आर्थिक वर्षमा १८ वटा नाउर र १० वटा झारलको कोटा भएपनि १० नाउर र ५ झारलको मात्र शिकार भएको छ ।
तस्वीर : ढोरपाटन पोष्ट टिमको फागुने ‘ब्लक’ भ्रमणमा लिइएको हो ।
गण्डकी प्रदेशको विषेश अधिवेशन बैशाख २७ मा बस्ने
बडिगाडका ८७ वर्षिय पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण धौलागिरी अस्पतालमा मृत्यु